Madaxweynaha Galmudug oo la kulmay safiirka dawladda Jarmalka u fadhiya Soomaliya. – Radio Daljir
Madaxweynaha Galmudug oo la kulmay safiirka dawladda Jarmalka u fadhiya Soomaliya.
Abriil 23, 2019 4:35 g 0
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo weli booqasho ku jooga Magalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya ayaa waxaa Maanta uu halkaasi kula kulmay safiirka dawladda Jarmalka u fadhiya Soomaliya.
Madaxweyne Xaaf iyo Ms. Annett Gunther ayaa waxaa ay ka wada hadleen xaalada Soomaaliya sigaar ah tan deegaanada Dowlad goboleedka Galmudug oo xilligaan dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan.
Madaxweynahu wuxuu uga mahad celiyey dawladda jarmalka hawsha adag ay ka wadaan Somalia gaar ahaanna kuwa ay ka wadaan Galmudug. Wuxuuna u bandhigay baahiyaha ka jira Galmudug loona baahan yahay in dawladda jarmalka gacan ka geysato.
Horay ayaa Madaxweynaha Galmudug waxa uu ula kulmay safiirka Midawga Yurub u qaabilsan Somaliya, Fulgencio Garido-Ruiz, isaga oo u sharaxay in Dowlada dhexe ay siyaasadeysay mashaariicdii horumarineed ee Galmudug caalamka ugu talagalay.
Saraakil ka tirsan Alshabaab oo isasoo dhiibay